I-AfricanResearch - AfricArXiv
Izindlela Zokucwaninga Ngokwehlukanisa Amakoloni
I-AfricArXiv ineqhaza ekukhululweni kwamakholoni ngokukhuthaza ukuqondwa kokukhishwa kwamakholoni ngamaphrinti; ukwamukela ukuthunyelwa ngaphambi kokushicilelwa ngezilimi zombili nolimi lwendabuko, kanye nokuvumela ubunikazi bocwaningo lwase-Afrika ngabantu base-Afrika ngokusungula indawo esezingeni eliphansi, ephethwe yi-Afrika yezwekazi lase-Afrika.
By UJoel Onyango , 4 izinyanga 4 izinyanga edlule
I-AfricArXiv ngamafuphi - esikwenzayo, impumelelo yethu kanye nohlaka lwethu lomgwaqo
Sekuphele iminyaka engaphezu kwemibili sisebenze ne-AfricArXiv siyajabula ukwethula ukubuka konke ngomsebenzi wethu. Uthola eminye imininingwane nolwazi kuCite njengo: Ahinon, JS, Ksibi, N., Havemann, J. et al. (2020, Septhemba 25). I-AfricArXiv - i-pan-African Open Scholarly Repository https://doi.org/10.31730/osf.io/56p3e Njengabasayini Funda kabanzi…
By I-AfricArXiv, 10 izinyanga 5 izinyanga edlule
Ingxoxo no-Olabode Omotoso weNational Cancer Prevention Program, eNigeria
Yini ebangela ukushona okuphansi kwe-COVID-19 e-Afrika? Siyini isimo sokuxhumana ngocwaningo e-Afrika? Funda izimpendulo zikaMnu Olabode mayelana nomthelela wesikhathi sokuphila kanye nokuhlukahluka kwe-SARS-Cov-2 ku-transmission ye-COVID-19 nokufa e-Afrika.
By UJohanssen Obanda noPriscilla Mensah, 10 izinyanga 5 izinyanga edlule
Ukuxoxisana no-Oguta Job Francis waseBusitema University, e-Uganda
Siyithola kanjani enye indlela eshibhile yokukhiqiza ukudla okwanele okusezingeni ukondla umhlaba? Funda izimpendulo zikaJob Oguta ngomthelela wocwaningo lwakhe kwi-SDG Goal 2 - Zero Hunger, kanye neminikelo ebalulekile ososayensi abanjengoMnu Oguta abayenzayo ezwenikazi lase-Afrika. Can biotech Funda kabanzi…
By UJohanssen Obanda noPriscilla Mensah, 12 izinyanga 5 izinyanga edlule
By UJohanssen Obanda, 1 ngonyaka izinsuku 2 edlule
Impendulo ye-COVID-19 Africa
Ukuqoqa izinsiza kusuka nakuwo wonke amazinga omphakathi wase-Afrika ukuhlanganisa izimpendulo ze-COVID19 ezinhlanganweni zezinhlangano zase-Afrika kanye nethonya ezinkulungwaneni Izinkulungwane zabantu ngamakhulu ezinqenqemeni kanye nezinhlangano zomhlaba wonke, ama-CBO, amaNPO, ohulumeni nezimboni basebenza kanzima ukunciphisa imiphumela yobhubhane kulolu bhubhane Izwekazi lase-Afrika. Asinjalo Funda kabanzi…
By UJo havemann, 1 ngonyaka 5 izinyanga edlule